Ra`iisul wasaaraha Israa'iil oo hanjabaad uga jeediyay Iran xarunta Golaha Ammaanka ee QM : Calanka.com
Ra`iisul wasaaraha Israa’iil oo hanjabaad uga jeediyay Iran xarunta Golaha Ammaanka ee QM
Raysalwasaaraha Israa’iil Naftali Bennett ayaa u sheegay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay in barnaamijka nukliyeerka Iiraan uu ka tallaabay “dhammaan khadadka cas” ee dalkiisa.
Wuxuu ku eedeeyay Iiraan inay doonayso inay ka taliso Bariga Dhexe iyadoo ka abuuraysa dallad nukliyeer gobolka, wuxuuna ku adkaystay in Israa’iil aysan u oggolaan doonin Iiraan inay hesho hubka nukliyeerka.
Waxa kale oo uu ka dhawaajiyay suurtogalnimada in Israa’iil kaligeed wajihi doonto Iiraan, arrintaas oo uu dalkiisu marar badan ku hanjabay.
Bennett ayaa yiri: “Barnaamijka nukliyeerka Iiraan wuxuu gaaray heer biyo -galeen ah sidoo kale dulqaadkeenna ayaa isna gaaray heerkii ugu dambeeyay,”.
Tehran ayaa kor u qaaday barnaamijkeeda kobcinta nukliyeerka ka dib markii Maraykanku ka baxay heshiiskii 2015 ee xaddidayay hawlaha nukliyeerka Iran.
Wakaaladda Tamarta Caalamiga ah ee Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay Axaddii in Iran aysan u oggolaan kormeerayaasheeda inay booqdaan mid ka mid ah xarumaheeda.
Bennett, oo ah siyaasiga garabka midig ee soo afjaray waayihii Benjamin Netanyahu ee ra’iisul wasaaraha, ayaa doonaya in madaxweyne Joe Biden uu mowqif adag ka qaato Iran, oo ah cadowga gobolka ee Israa’iil.
Bennett wuxuu ka soo horjeedaa dadaallada maamulka cusub ee Mareykanka uu ku doonayo inuu dib ugu soo nooleeyo heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan, kaasoo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ka baxay 2018 -kii.
Wadahadaladii aan tooska ahayn ee u dhexeeyay Maraykanka iyo Iiraan ayaa hakad ku yimid, islamarkana Mareykanka ayaa weli sugaya tallaabada xigta ee uu qaadayo Madaxweynaha cusub ee Iiraan, Ebrahim Raisi.
Codkii Bennett wuxuu aad uga yaraa Qaramada Midoobay midda Netanyahu. Laakiin wuxuu ku adkeystay, sida Netanyahu, ballanqaadkiisii ahaa inuu sameyn doono wax kasta oo awoodiisa ah si looga hortago Iran, oo Israa’iil ay u aragto inay tahay khatar jirta, inay dhisto hub nukliyeer ah.